ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “စီးပလေစေ..ချစ်သူရေ..”
February 7, 2009 at 12:53 PM
Aye Myat Myat Ko said...
ဆပ်ပြာသည် လင်ပျောက် ဆိုတာကရော
ဆိုလိုရင်း နဲ့ usage ကို သိပါတယ်
ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ အဲဒါကို ဆပ်ပြာသည်နဲ့ ပုံခိုင်းရတာလဲ research လုပ်ကြည့်ပါလား
့“စီးပလေစေ... မောင်မသုတ်နဲ့” ကို လူပျိုပေါက်စ တုန်းက စကြားဖူးတော့ တမျိုးအတွေးပေါက်ခဲ့ဖူးတယ်..(?)။ နောက်တော့ 'မျက်ရည်'လို့နားလည်ခဲ့ဖူးတာ၊ ခုတော့ 'ချွေး' လို့လက်ခံလိုက်ပါပြီ..(ကိုပေါပြောရင် ဘာမဆို ယုံတတ်သူဆိုတော့..:P)
'တရွာမပြောင်း သူကောင်းမဖြစ်' ၊ 'သေချင်တဲ့ကျား တောပြောင်း' နဲ့ 'သုံးကျောင်းပြောင်းသော ရှင် (သျှင်)' တို့ကိုလည်း ဆက်စပ်ပေးပါအုံး..သုခမိန်ကိုပေါခင်ဗျား..။
ဒါဒါဒစ် ဒစ်ဒစ်ဒါ said...
ဘာမှတော့ မဆိုင်ပါဘူး၊ မေးချင်လို့ပါ။
(လှေကြီးထိုးရိုးရိုး) နဲ့တော့ မရှင်းနဲ့ပေါ့ဗျာ၊
>>>>ကောင်းကင်ကို….. ဟဲဟဲ။း-)
>>>>အေးမြတ်မြတ်ကို…. ဆပ်ပြာသည်လင်ပျောက်… ဟုတ်တယ်။ ဘာကြောင့် ဆပ်ပြာသည်နဲ့မှ နိုင်းရတာလဲ။ စိတ်ဝင်စားစရာ။ ကွမ်းယာသည်လင်ပျောက် ဆိုရင်ရော မရဘူးလားမသိ။
>>>>စီအမ်အေ……((ကိုပေါပြောရင် ဘာမဆို ယုံတတ်သူဆိုတော့..:P)) မြားတွေကို ဆက်လက်ဖိတ်ခေါ်နေတယ်ပေါ့လေ။ မောင့်အချစ်မြား အသဲမှာစူး…နှုတ်လည်းနှုတ်ချင်လေဘူးလေ…..။ ဟိုသုံးခုတော့ ဆက်စပ်တတ်ဘူးဗျား။
>>>>ဒါဒါဒစ် ဒစ်ဒစ်ဒါ….. ကိုယ့်လူက ကြပ်ကလေးစာတွေ တော်တော်ဖတ်ထင်ရဲ့။ နာမည်တောင် အက်စ်အိုအက်စ် ရိုက်တဲ့အသံမျိုးနဲ့။ မုန်လာဥမလုပ်ချင်ပါနဲ့ ဆိုတာ… သိရဲ့သားနဲ့ မသိချင်ယောင် ဆောင်မနေပါနဲ့လို့ ပြောချင်တာမို့လား။ အဲဒီထက်ဆန်းအောင်တော့ ရှင်းတတ်တော့ဘူး။ စလောင်းဖုံးနှစ်ချပ်တီးရင် ကျားလာတတ်တယ်ဆိုတာတော့ အခုမှ ကြားဖူးတာဗျ။
ဆရာမ လာတို့တော့ ပျော်သည် - ဆိုပလား၊ စဉ်:စားစရာ များစွာ ရသွား၏၊ (ဟီး)
This is so damn funny,
You really areagenious.
BTW, how to read other ppl's comment written in Burmese.
I have zaw gyi one font but somehow i can't read.
Is there any setting i need to change?
Don't click directly on the comments.
You can click on the post title in order to see the comments in Burmese. They will be shown just beneath the post.
Self-Control နှင့် ဝိတက္ကသဏ္ဌာနသုတ်